Wasiirka Qurba Joogta DDSI oo Xafiiskiisa Kulan kula Yeeshay Hogaaminta jaaliyada DDSI Ee Somaliland - Cakaara News
Wasiirka Qurba Joogta DDSI oo Xafiiskiisa Kulan kula Yeeshay Hogaaminta jaaliyada DDSI Ee Somaliland
Jigjiga(CN) Arbaco, August 19,Wasiirka qurba joogta DDSI mudane Cabdibari Macalin Maxamed ayaa xafiiskiisa ku lan dheer oo saacado qaatay kula yeeshay hogaaminta jahliyada DDSI ee Somaliland oo ah qurba joogtii ka qaybgashay kulan waynihii xuska qurba joogta dalkeena itoobiya ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay xarunta dalka ee Addis ababa.
Waxaana kulankaasi ugu horayntii ka hadlay wasiirka qurba joogta DDSI mudane cabdibari macalin maxamed oo ugu horayntii u mahad celiyay qurba joogtan sida qiimaha badan ee jahliyadan DDSI- Somaliland uga qaybqaataan hirgalinta hawlaha horumarka iyo nabadgalyada deegaanka kasocda.
Wuxuuna wasirku sharax dheer ka bixiyay jihooyinka iyo istaraatajiyada xukuumada deegaanka iyo dalkaba u dajisan ee ku wajahan sii xoojinta xidhiidhka qurba joogta iyo doorka ay ku leeyihiin qurba joogtu gaar ahaan kuwa ku dhaqan wadamada aan dariska nahay.
Wasiirka ayaa si qoto dheer uga warbixiyay fursahada maalgashi ee deegaanku hodanka ku yahay taasi oo uu ku booriyay in ay ka faa’iidaystaan fursadahaasi siina xoojiyaan la dagaalanka iyo dabargoynta ay JDFI iyo tan deegaankuba ugu jiraan hadhaaga Al-qushaash ee ka dhaq dhaqaaqa wadanka aan dariska nahay ee somaliya.
Qaarka mid ah hogaaminta jahliyada oo uu ka mid yahay Gudoomiyaha jahliyada itoobiya ee Somaliland mudane Cali Axmed Rooble ayaa si qoto dheer ugu mahad celiyay xukuumada DDSI dadaalada balaadhan ee ay sanadihii ugu danbeeyay ku talaabsatay gaar ahaana xidhiidhka qurba joogta oo sanadihii hore kala xidhnaan jiray iyo sida diiran ee loogu soo dhaweeyay deegaanka iyo dalkaba.
Waxayna hoosta ka xariiqeen shirwaynihii xuska qurba joogta dalka ee ka dhacay xarunta dalka Addis Ababa oo ay sheegeen in ay u tahay dhamaanba qurba joogta dalka gashiyo horumarineed taasi oo ay ka soo baxeen gu’aano horumarineed kuwaasi oo siina karaar galinaya xidhiidhkii wanaagsanaa ee xukuumada iyo qurba joogta.